Maareynta Bulshada Xaqa Loo Sameeyay | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 29, 2013 Jimcaha, Agoosto 30, 2013 Kelsey Cox
In kasta oo doorarkoodu ay aad uga duwanaan karaan hal warshad ilaa tan ku xigta, maareeyayaasha bulshada ayaa inta badan ah kuwa masuulka ka ah kobaca dhagaystayaasha sumcadda iyo hawlgelinta. Had iyo jeer safka ugu horreeya ee daboolaya baahiyaha iyo codsiyada macaamiishaada, waxay diiradda saarayaan waxa ugu fiican shirkaddaada: ka caawinta inay ilaaliso taageerayaasha bulshada sumcadda, jabiso trolls lama huraanka ah, iyo hagaajinta aragtida guud ee astaantaada.
Hadday kala soocayso qoraallada iyo farriimaha, abaabulidda dhacdooyinka, ama u rogeyso jawaab celin taban oo wanaagsan, maareeyayaasha bulshada ayaa ah buundada ugu dambeysa ee ka dhexeysa bulshada macaamiisha ah iyo magacaaga oo xambaaraya waajibaadka iyo xilalka badan hal mar. Dhinaca kale, waxay ku dhiirrigeliyaan taageerayaasha inay noqdaan horyaallo - iyaga oo siinaya aqoonsi khadka tooska ah ah, xaalad dhexdhexaadiye, iyo marin u helidda macluumaadka shirkadda. Dhinaca kale, waxay aqoonsadaan, qiimeeyaan, oo xalliyaan khilaafaadka iyo dhibaatooyinka ka dhex dhaca xubnaha bulshada, iyagoo ka celinaya jawaab celinta xun inay saameyn ku yeelato sumcaddaada shirkadda.
Sidee ayey ku gaarayaan yoolalka geesinimada leh? Sida laga soo xigtay Hel Qanacsanaan, Haysashada bulsho isku xidhan ayaa caqabad ku ah laakiin hubaal waa loo samayn karaa kuwa sida saxda ah u qalabaysan. Fiiri tooda ilaha maareeyaha bulshada iyo hagaha guusha:
Tags: Kooxda heysata horyaalkaWaxqabadka Bulshadamaamulaha bulshadaAdeegga macaamiishainfographicTrolls
Aug 30, 2013 at 2: 49 AM
waa maxay cinwaankaaga tweet-ka kelsey ??